The kasị dị ịrịba ama-ulo-ikwū na Germany | Save A Train
Home > Travel Europe > The kasị dị ịrịba ama-ulo-ikwū na Germany
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 25/01/2021)
Germany bụ ndammana a mara mma mba. Ma mgbe ị na-amalite na-eche banyere castles, ị ga-n'anya ya ọbụna karị. Na ihe nile nke na n'ihi na Germany bụ, dị ka ọtụtụ, nnukwu ụlọ isi obodo nke ụwa.
E nwere a dum usu ikpọ castles na Germany mkpa ka ị gaa na. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-etinye uche na ihe ndị kasị mma n'etiti ha. Anyị ga-enye gị info na otú i nwere ike iru ha n'ụgbọ okporo ígwè, na ụtọ nke niile ụgbọ okporo ígwè ndị hụrụ!
Schloss Neuschwanstein - The kasị dị ịrịba ama Castle na Germany
Ọtụtụ ndị maara ya dị ka otu n'ime ihe ndị kasị mara mma castles na ụwa dum, bụghị naanị Germany. Ọ bụrụ na ọ bụghị na, ọ bụ na-ama maka ịbụ onye mmụọ nsọ maka Disney Castle. Mgbe ị na-a lee anya na nke a akụkọ ifo nnukwu ụlọ, ị na-aghọta ihe mere. Ị nwere ike na-aghọta ihe mere na ọ bụ n'etiti ndị kasị akpali akpali castles na Germany!
Schloss Neuschwanstein bụ ịrụ ụka adịghị ebube, ma olee otú ị ga-esi e? The ihe ọma banyere Germany bụ na ọtụtụ ebe jikọọ via ụgbọ okporo. The ezigbo ụgbọ okporo ígwè na nnukwu ụlọ bụ na Fussen. Otú ọ dị, i nwere ike iru na ebe site Munich ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nnukwu German obodo.
Ulm ka Fussen Ụgbọ oloko
Munich na Fussen Ụgbọ oloko
Stuttgart na Fussen Ụgbọ oloko
Nuremberg na Fussen Ụgbọ oloko
Hohenzollern - The Kasị kpokọtara Castle na Germany
Hohenzollern nnukwu ụlọ abụghị nanị n'etiti ndị kasị akpali akpali castles na Germany - na ọ bụ ihe ndị kasị kpokọtara otu. I nwere ike ịhụ na ọ na n'ógbè Baden-Württemberg, nso Stuttgart. Baden-Württemberg ógbè bụ ihe kasị underrated onye na Germany, ma mgbe ị na-ahụ nke a nnukwu ụlọ, ị na-aghaghị ịgbanwe gị chere!
Otú ọ dị, na-na nnukwu ụlọ nwere ike ịbụ mfịna, albeit kpamkpam kwesịrị ya. The ụzọ kasị mma bụ na-a ụgbọ okporo ígwè si Stuttgart na Hechingen. Mgbe ahụ gị mkpa iji a ogologo ibugo onu na ịrị a nkpoda ugwu iru nnukwu ụlọ. M na-egwu egwu! Ị nwere ike na-a ụgbọ ala mgbagharị ma ọ bụ a taxi si Hechingen dị ka nnukwu ụlọ bụ nnọọ nso na obodo.
Hohenzollern Sigmaringen - The kasị ukwuu Castle na Germany
Anyị dị umeala n'obi uche, dịghị ndepụta nke kasị ikpọ castles na Germany nwere ike izu ezu enweghị banyere Hohenzollern Sigmaringen. Ọ bụ ihe kasị ọtụtụ na kasị ukwuu nnukwu ụlọ ị ga-ebi dina anya gị na! Ma ọ bụrụ na ndị na-ezughị, ọ bụ nakwa wezuga breathtaking.
Hohenzollern-Sigmaringen bụ ya mere na Baden-Württemberg; ya mere, ọ bụ kpam kpam atụ n'anya mere ndị mmadụ na-adịghị na-eto ógbè dị ka kasị mma onye na Germany!
Ma njem - ebe i nwere ike ịhụ nnukwu ụlọ na a obodo, ọ bụ mfe iji ụgbọ okporo ígwè. The ụzọ kasị mma bụ na-a ụgbọ okporo ígwè si Ulm ma ọ bụ Stuttgart na mgbe na-eje ije na nnukwu ụlọ.
Frankfurt na Ulm Ụgbọ oloko
Stuttgart na Ulm Ụgbọ oloko
Leipzig na Ulm Ụgbọ oloko
Nuremberg na Ulm Ụgbọ oloko
Nnukwu ụlọ na-anọchi naanị na a obere ugwu, na ya anya n'ezie ikpọ. Otú ọ dị, ọ bụghị otú owu ozugbo ị gaa na akaụntụ na ọ ka na-bi! Ee, na Eltz ezinụlọ emeela nnukwu ụlọ maka 33 ọgbọ!
Mgbe ọ na-abịa na-e, ị ga na-eje ije ma ọ bụ na-a ụgbọ ala ma ọ bụ taxi si Hatzenport. Otú ọ dị, ọ bụ kpamkpam na o kwere omume na-esi na obere obodo ụgbọ okporo ígwè si Koblenz - kacha nso nnukwu obodo.
Frankfurt ka Hatzenport Ụgbọ oloko
Bonn na Hatzenport Ụgbọ oloko
Cologne ka Hatzenport Ụgbọ oloko
Düsseldorf ka Hatzenport Ụgbọ oloko
N'ihi ya, e na ị nwere ya, a zuru ndepụta nke ihe ndị kasị akpali akpali castles na Germany. Anyị nwere olileanya na ị ga-gaa na ọ dịkarịa ala otu n'ime ha na gị ọzọ njem! Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere njem ụgbọ okporo ígwè ndị a castles, na-eche free kpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-spectacular-castles-germany%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Jamanị Leslọ europetravel trainjourney Tranride ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Travel travelgermany
Atụmatụ N'ihi Western Europe Site Train Na 2 izu
Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel France, Train Travel Switzerland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe